Ziziphi iimfudu ezisefeshini kule hlotyana: Ifoto ye-27!
Juni 19, 2018 Dianne Reeves Uyilo
Uluhlu lweempahla ezihamba phambili eziphathekayo kuzo zonke iintlobo zamabhinqa ezisuka kumanqatha amanqamama kunye nabasetyhini.
Ukuba unxibe i-swimsuit efanayo apho ulele khona elunxwemeni kwiminyaka eyi-10 edlulileyo, unokufuna ukuphucula. Yaye ukuba ungenayo ixesha lokuhlelwa kwee-salons, siza kukubonisa zonke iifashthi zelo hlobo. Ukusondela kwiinyanga ezifudumalayo zezulu zizathu ezifanelekileyo zokuhlaziya iimpahla zakho zokubhukuda.
Siza kukuxelela malunga nemikhwa yokuhamba, enokuyithenga ehlobo le-2018 ngonyaka. Apha uya kufumana into ebantwini bonke, ukusuka kwii-classic silhouettes, ukuya kwizinto ezifake imfashini ezinxibe ngeenkwenkwezi zaseHollywood. Ukubukela okulungileyo
Iqhutywe nge-VSCO c9 kunye ne-preset
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-3,781, ukutyelelwa kwe-6 ngosuku)
Gqoka ngephunga elimnandi: i-summer trendy trend
Izambatho zokudibanisa: khetha i-façade ephathekayo
Indlela yokubeka izinto ndawonye ukuze bathathe ubuncinane bendawo
Amafu ekamelweni labantwana: i-30 iingcamango ezintle
Ikhishi lasehlobo: I-25 imibono yelungiselelo kwi-veranda kunye neyadi
Iikhosi zeeNgesi zamahhala zamahhala
Isitayela se-Ofisi: ukuqokelela imifanekiso enomdla
Post Previous:Ngoku ubonile yonke into. Imidlalo yeOlimpiki yeBDSM
Okulandelayo Post:Веревки Быкова – перечитывает снова и снова конец «Сотникова»
Путин Эраст Петрочинский uthi:
Oktobha 11, 2018 kwi-4: 03 am
I-pedicure yohlobo lwehlobo: I-30 imibono yeholide (14)
UJessica Weaver (uJessica Weaver) kunye nezigidi ze-4.9 ... (9)
Inkwenkwezi yaseMelika uBeor Thorne ibonise ukuxhamla kwakhe ... (7)